Vaovao - Inona no atao hoe karaoke？
Inona no atao hoe karaoke？
Ny anaran'ny karaoke dia avy amin'ny teny japoney hoe "fahabangana" sy "orkestra". Miankina amin'ny zava-misy ao, ny karaoke dia mety hidika ho karazana toeram-pialamboly, fihirana ho any aoriana, ary fitaovana hamoahana ny backtracks. Na inona na inona sahan-kevitra misy azy, dia mikrôfôna sy hazavana manjelanjelatra amin'ny efijery foana isika no maka sary, ary rivo-piainana fety. Ka inona izany hoe karaoke?
Tsy misy valiny manokana amin'ny fanontaniana hoe oviana no nisehoana ny karaoke voalohany. Raha miresaka momba ny fihirana mozika tsy misy tononkira isika, dia vao tamin'ny taona 1930 dia efa nisy ny firaketana vinyl niaraka tamin'ny backtracks, natao ho an'ny fampisehoana an-trano. Raha miresaka momba ny mpilalao karaoke iray isika, ny prototype dia natao voalohany tany Japon tamin'ny voalohan'ny taona 1970 tamin'ny alàlan'ny fikasihan-tànana nataon'ny mpiangaly mozika Daisuke Inoue, izay nampiasa ny backtracks nandritra ny seho nataony mba haka aina kely ary mitazona ny haavon'ny fiakaran'ny mpanatrika.
Nihalehibe ny Japoney nihira tamin'ny backtracks ka vetivety dia niseho ny indostria vaovao amin'ny famokarana milina karaoke ho an'ny bara sy klioba. Tamin'ny fiandohan'ny taona 1980 dia niampita ny ranomasina ny karaoke ary tonga tany Etazonia. Voalohany, nomena soroka mangatsiaka izy io, saingy taorian'ny namoronana ireo mpilalao karaoke avy any an-trano dia nanjary nalaza tokoa io. Ny lahatsoratra "Evolisiona Karaoke" dia hanome anao fampahalalana bebe kokoa momba ny tantaran'ny karaoke.
Ny feon'ilay mpihira dia nandeha tamin'ny alàlan'ny mikrô iray mankany amin'ny tabilao fampifangaroana, izay nifangaroana sy nametahana ny lamosina. Aorian'izany dia nampitaina niaraka tamin'ny mozika tamin'ny rafi-peo ivelany. Ireo mpanakanto dia namaky ny subs avy amin'ny fahitalavitra. Any aoriana, horonantsary mozika voalohany na sary namboarina manokana miaraka amin'ny atiny tsy miandany no nilalao.
Miracast Display, Karaoke Mikrofona Wireless, Mikropono Portable Karaoke, Mihirà Magic Karaoke Player,